समाचार राजनीतिक दलले पनि चलाए मतदाता शिक्षा
Ujyaalo सोमवार, मंसिर १८, २०७४ ००:३६:००
तेह्रथुम, मंसिर १७ – मत बदर हुन नदिन तेह्रथुममा राजनीतिक दलले पनि मतदाता शिक्षा दिएका छन् । जिल्लाका मुख्य प्रतिस्पर्धी नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमालेले चुनाव प्रचार प्रसारसँगै मतदाता शिक्षालाई पनि अभियानकै रुपमा सञ्चालन गरेका हु्न् ।
दलहरुले चुनाव प्रचार प्रसारका लागि आयोजित चुनावी सभाहरुमै सहभागीलाई कसरी मतदान गर्ने ? भन्नेबारे सिकाइरहेका छन् । कतिपय गाउँमा दलका कार्यकर्ताले घरदैलो कार्यक्रमसँगै मतदाता शिक्षा दिइरहेका छन् । निर्वाचन आयोगले गरेको मतदाता शिक्षा कार्यक्रमले सबै मतदाता प्रष्ट नहुने र मत बदर हुनसक्ने भन्दै दलहरुले मतदाता शिक्षालाई प्रभावकारी बनाउन आफै अभियान चलाएका हुन् ।
मतदाता शिक्षाका लागि दलहरुले नमुना मतपत्र लगायत आवश्यक सामग्री समेत आफै छपाएका छन् । गाउँ–गाउँमा आफ्ना कार्यकर्ताहरु मार्फत घरदैलो गरेर समेत मतदाता शिक्षा दिइरहेको कांग्रेस जिल्ला सचिव सन्तोष सुब्बाले बताउनुभयो । ‘निर्वाचन आयोगले खटाएका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले सबै कुरा प्रष्ट सिकाउँदैनन्, कतिपय मतदाता कहाँ त अझै पनि उनीहरु पुगेका छैनन्’, उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामीले आफै कार्यकर्ता परिचालित गरेर मतदाता शिक्षा दिइरहेका छाँै ।’
शुक्रबारदेखि जिल्लाका सबै ४३ वटै वडामा दलका नेता कार्यकर्ताले घरदैलो कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन् । घरदैलो सँगसँगै जिल्लाभरि मतदाता शिक्षा कार्यक्रम समेत पार्टीले छुट्टै सञ्चालन गरेको एमाले जिल्ला उपसचिव भुपतिलाल श्रेष्ठले बताउनुभयो । ‘सबै मतदाता अझै पनि स्पष्ट भइसकेका हुँदैनन्, त्यसैले पार्टीले मत बदर नहोस् भनेर सबैतिर अभियान चलाएको छ’, उहाँले भन्नुभयो ।
गाउँका सबै मतदातालाई कसरी मतदान गर्ने ? भनेर थाहा भइसकेको छैन । घरदैलो गर्दै जाँदा धेरै मतदाताले मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता आएको, तर आफू प्रष्ट नभएको बताएका एमाले जिल्ला सदस्य रेनुका भट्टराईले जानकारी दिनुभयो । ‘हामी शनिबार दिनभर घरदैलोमा थियौँ, पिप्लेका कतिपय गाउँमा मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता पुगेकै छैनन्, पुगेका ठाउँमा पनि प्रष्ट छैनन्’, उहाँले थप्नुभयो ।
‘दुर्गम गाउँमा त मतदाता शिक्षा पुगेकै छैन, समय पनि कम भयो’, कांग्रेस नेता टेकराज तिगेलाले भन्नुभयो । गाउँमा भएको समूहमा बैठकमा आएर मतदाता शिक्षा कार्यकर्ताले मतदान गर्नेबारे जानकारी दिए पनि आफूलाई अझै प्रष्ट भइनसकेको म्याङलुङ्ग नगरपालिका–८, आम्बुङकी इन्दु सम्बाहाम्फेले बताउनुभयो । ‘भोट हाल्ने बारे एक पटक त सिकेकै हो, तर अझै प्रष्ट चाँहि छैन,’ उहाँले भन्नुभयो ।
‘गाउँमा घर–घर गएर सबैलाई सिकाउनलाई मतदाता घरमा नभेटिने हुनाले सकस भएको आठराई गाउँपालिका–४, इवाका मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता दुर्गाप्रसाद भट्टराईले बताउनुभयो । एक निर्वाचन क्षेत्र रहेको तेह्रथुममा ८९ वटा मतदान केन्द्रमा हरेक केन्द्रमा एकजना मतदाता शिक्षा कार्यकर्ता खटाएको छ ।
उनीहरुले काम निरन्तर रुपमा गरे नगरेको बारे नियमित अनुगमन तथा परिचालनका लागि समेत आवश्यक व्यवस्था गरिएको जिल्ला निर्वाचन अधिकारी निर्मलकुमार राईले बताउनुभयो । उहाँका अनुसार जिल्लाका म्याङलुङ्ग, मोराहाङ र पोक्लाबाङमा नमुना मतदान कार्यक्रम समेत सञ्चालन गरिएको छ ।